filimka Baadshaho maalintiisa kowaad lacagaha uu keenay gudaha Hindiya | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada filimka Baadshaho maalintiisa kowaad lacagaha uu keenay gudaha Hindiya
Monday, September 04, 2017 Bulshada Edit
Bulsha:- Super Star Ajay Devgn filimkiisa Baadshaho sidoo kalena ay ku wehliyaan Emraan Hashmi, Ileana D’Cruz iyo Vidyut Jamwal ayaa ganacsi dhex dhexaad ah sameeyay maalintiisa kowaad.
Sida shabakada Boxoffice India xaqiijisay Baadshaho maalintiisa kowaad wuxuu keenay 10.25 Crore (Trade Figure) maantana waxaa la filaa in ganacsigiisa sare u kac sameeyo madaama maanta Hindiya ciida carafo looga dabaal dagayo.
Baadshaho wuxuu ka bilaabasho wanaagsan yahay Ajay Devgn filimkiisii ugu dambeeyay ee tiyaatarada faraha badan la saaray sida Shivaay (9.19 crore) laakiin wuxuu ka bilaabasho hooseeyaa Action Jackson (10.37 crore).
Baadshaho ganacsigiisa ugu wanaagsan maalinta kowaad wuxuu ka sameeyay UP, Rajasthan, Bihar, CI iyo CP Berar wuxuuna inta badan ku wanaagsnaaa tiyaatarada Single Screens ee dadka dabaqada dhexe iyo hoose u daawasho tagaan.
Magaalooyinka waa weyn ee dadka reer magaalka usoo daawasho tagaan aflaanta ku nool yihiin sida Mumbai, Delhi iyo Bangalore maalinta kowaad ganacsiga Baadshaho wuu ku liitay sidaa darteed maanta oo fasax weyn jiro waa inuu sare u kac xoogan halkaas ka sameyaa.